Koofiyadaha Gawaarida ee Deer Red / Gray Hanukeii
Deerada Casaanka / Grey
Koofiyadaha xamuulka qaada ee aruurinta Hanukeii® Iyaga waxaa abuuray oo loogu talagalay haweenka hadda jira, ee bilaashka ah iyo kuwa xiisaha leh. Vanguard, wada noolaanshaha iyo xorriyadda #BAREFOOTLIFE
Naqshadeynta hadda loogu talagalay haweenka avant-garde
Xiritaanka laf-dhabar lagu habeyn karo oo leh nidaamka "Snap-Back"
60% suuf / 40% polyester ah
5 Guddi oo leh indho qalooca
MUHIIM: Waligaa ha ku dhaqin mashiinka dharka dhaqa, waa inaad had iyo jeer gacanta ku dhaqdaa
Style, qurux, dabiici, qurux, casri, avant-garde ... Haweenka qarniga XNUMXaad waa kuwo xoog badan oo kalsooni leh. Haween ahaanshuhu wuxuu lamid yahay geesinimada. Ahaanshaha haweeney guuleysata waxay lamid tahay la dagaalankii dhumuc iyo dhumucba. Haweeneynimadu kama fiicna mana ka xumaato inaad nin noqoto, waa wax si ka duwan taas oo waliba layaableh oo gaar ah. Waa kaamil ahaan dhammaystirka xoogga adduunka: wada noolaanshaha, dareenka, taabashada, tafaasiisha, fudeydka iyo kakanaanta isla waqtigaas.
En Hanukeii waxaan la jaanqaadnay baahiyaha naagta maanta jirta. Waxaan u abuureynaa badeecooyin dumarka maanta jira oo garanaya waxay rabaan iyo sida ay u doonayaan iyo sidoo kale, waxaan siineynaa nolol iyo baashaal.
Koofiyadu waa qalab wax ku ool ah oo aad iskaga difaacdo qorraxda oo waliba qeexaysa qaabkaaga iyo shakhsiyaddaada.
Waqtigan xaadirka ah waxay astaan ​​u noqdeen moodada hadda jirta, iyadoo ay yar yihiin dadka caanka ah ee ka soo jeeda adduunka moodada iyo cayaaraha, kuwaas oo aan ka soo muuqan daboolka mesh ee ku yaal deegaan noocyadiisa kala duwan xagaaga iyo jiilaalka labadaba.
Nooca xiritaanka ee la hagaajin karo Soojiidasho si loo waafajiyo cabir kasta oo madax ah. Nooca caadiga ah ee dhiiri galiyay 80-naadkii iyo 90-meeyadii. Koofiyadeheenna gawaarida xamuulka waxaa lagu qaabeeyey cirif qalooc ah. Way kufiican yihiin inay ku weheliyaan safaradaada ku wareegsan meeraha dhulka ama noloshaada caadiga ah.
Waxaan ku noolnahay adduun aan ku dhex nool nahay tiro nool oo aan lasoo koobi karin. Qaarkood waa waxashnimo, qaarna waxay yihiin kuwo gudaha ah, xitaa ma arki karaan indhahayaga iyo kuwo kale oo aan uga baqeyno baaxadooda iyo xooggooda.
En Hanukeii waxaan abuurnay koofiyado isku duuban oo ka soo jeeda nolosha xayawaanka; waxaannu ku siineynaa ururinta qaabab kala duwan iyo qaabab kala duwan, si xayawaan kasta oo aad ku garwaaqsato, waxaad u heli kartaa kaamil adiga kugu habboon.
Mid ka mid ah dabeecadaha ugu caansan ee wada hadalka, ciyaaraha ama xitaa milicsiga shaqsiyadeed, ayaa ah inaan ka fikirno xayawaanka aan isku aqoonsanno, midka kuwa kale ay naga mid yihiin ama midka aan jeclaan lahayn inaan u ekaano; Waana taas, in kasta oo aynaan wadaagin luqadda hadalka, haddana waxaan ilaalinaynaa, si uun, ula xiriiridda iyaga. Qaarkood waxay nagu dhiirrigeliyaan ixtiraam, kuwa kale xarrago, kuwa kale waxaan ku tilmaamnaa geesinimo iyo dhiirranaan, iyo kuwo kale waxaan u aragnaa xishood ama daciifnimo.
Miyaad horeba u ogeyd midka xayawaan tixraaca kuu ah, kan ku dhiirrigeliya ama ku siiya xoog? Waxaan hubnaa in lagu matalayo ururinta koofiyadeenna Hanukeii
WAAN AHAY WAXAN XIRNO
Qaabka aan u labisano, habka aan u doorano waxyaabaha soo raacaya muuqaalkeenna maalinlaha ah, ama waxa soo jiidasho leh oo aan dooneyno inaan soo qaadanno oo aan ku darno labiskeenna waa arrimo muujinaya qaar ka mid ah shakhsiyaddayada iyo dabeecadahayaga dabeecadda.
Sida aan u dooneyno dadka kale inay noo arkaan, sida aan u dooneyno inaan isku aragno maalin kasta markaan ka baxno guriga iyo nooca qalabka ee naga dhigaya inaan dareemo raaxo waa go'aan marka ay timaado in adduunka la tuso nooca dadka aan nahay.
En Hanukeii Waxaan dooneynaa inaad dareento sida naftaada boqolkiiba boqol waxaan abuurnay koofiyadan ay dhiiri galisay aduunka xayawaanku oo gebi ahaanba la jaanqaaday qaabkaaga.
Sadarkaan koofiyadaha wuxuu raacayaa isbeddelka koofiyadaha caadiga ah ee gawaarida xamuulka qaada, kuwaas oo ahaa ifafaale kacaan adduunka oo dhan tan iyo markii ay dhasheen. Daaran Hanukeii Waxaan nahay kuwa jecel koofiyadaha baseball, waxaanan qorsheynay qalabkan si ay ula jaan qaadaan qaabkeena.
Koofiyadaha ay dhiirrigelisay dunida xayawaanku waxay leeyihiin qaab-dhismeed uu dhabarku yahay mesh, wejiga horena wuxuu leeyahay indho-indheyn ka hortageysa falaaraha qorraxdu inay galaan indhaha. Qaybta kore ee muuqaalka waxaan ku siineynaa balastar kaas oo xayawaan lagu sawiray iyadoo magaceeda lagu tilmaamay xagga hoose.
Caga cad Madow
Caga cad Madow 40.00 €
Cagaar Cagaar / Buluug
Cagaar Cagaar / Buluug 40.00 €
Caga-cad Cawl / Madow
Caga-cad Cawl / Madow 40.00 €
Cagaar cagaar / Caddaan / Buluug
Cagaar cagaar / Caddaan / Buluug 40.00 €
Casaan cagaaran / Buluug
Casaan cagaaran / Buluug 40.00 €
Caga cad Caga / Grey
Caga cad Caga / Grey 40.00 €
Caga cad Royal Blue
Caga cad Royal Blue 40.00 €
Cago-cagaar Turquoise Buluug ah
Cago-cagaar Turquoise Buluug ah 40.00 €
Caga cad Caddaan / bunni / Cawl
Caga cad Caddaan / bunni / Cawl 40.00 €
Caga cad Caddaan / Midab
Caga cad Caddaan / Midab 40.00 €
Deer Brown / Buluug
Deer Brown / Buluug 40.00 €
Cawsha Cad / bunni / Cawl
Cawsha Cad / bunni / Cawl 40.00 €